hipster အဝတ်အစားနှင့်ဖက်ရှင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှာအဘယ်နည်း။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Hipster ဖက်ရှင်၊ hipster အဝတ်အစား
Paco မာရီယာ Garcia က | | သဘောထားတွေ
အဆိုပါ hipster စတိုင်ပိုင် အလွန်ထူးခြားတဲ့ထူးခြားတဲ့ရှိပါတယ်တဲ့မြို့ပြအုပ်စုတစ်စု.
Hipster အဝတ်အစားပေါ်တွင်အခြေခံသည် ပြန်လည်နှင့်စပျစ်သီးကိုဖက်ရှင်နှင့်လည်း၌တည်၏ အခြားရွေးချယ်စရာခေတ်ရေစီးကြောင်း.
1 hipster စတိုင်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာအချို့
2 hipster အဝတ်အစားကဘာလဲ?
3 Hipster အဝတ်အစားဒြပ်စင်
ကျနော်တို့နှင့်အတူ, ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများအတွက် hipster စတိုင်နမူနာမြင်ကြပြီ တင်းကျပ်သော hipster အဝတ်နှင့်အတူတစ် ဦး ဝိသေသမုတ်ဆိတ်, la ဘင်လာဒင်, ဘောင်းဘီတိုများနှင့် Wayfarer-type မျက်မှန်။
အမျိုးသားများ၏ hipster ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းသည်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားသည်။ The စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်Prada, Hermés, Lanvin, Zara, Gucci, H% M, Abercrombie & Fitch တို့ကဲ့သို့ပင်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ စတိုးဆိုင်များကိုရည်ညွှန်းသည်, ပို။ ပို။ hipster အဝတ်အစားကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ ခန့်မှန်းထားပါတယ် ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အမျိုးသားအဝတ်အစားရောင်းချမှုသည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၆၀ ကျော်ရရှိသည်။
Hipster အဝတ်အစားတွေယူလာပေးတယ် အခြားစတိုင်များမှတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားထိတွေ့။ ရှိသကဲ့သို့ဤဖက်ရှင်အတွင်း, ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်ရရှိနိုင်ပါသည် အဝတ်အများကြီး ဘယ်ဟာမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်
Hipster ခေတ်ရေစီးကြောင်း ကျပန်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေအများကြီးနှင့်အတူတစ်စပျစ်သီးကိုစတိုင်။ လူသိများသောခေါက်ဆွဲခွက်များအပြင်, ဒီလက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်၏ပုံမှန်သူတို့စျေးကွက်ကိုသွားကြတယ် hipster အဝတ်ကိုရှာဖွေ။ တစ် ဦး ကအလွန်ဝိသေသလက္ခဏာဒြပ်စင်ဖြစ်ပါတယ် ပဝါနှစ်၏မည်သည့်အချိန်၌မဆို။
Hipster ဖက်ရှင်ပေါင်းစပ် အသစ်များနှင့်အတူ retro အဝတ်။
အဆိုပါဝိသေသပဝါအပြင်, အစ အမျိုးအစားဖြစ်သော "skiny" အမျိုးအစားဘောင်းဘီသည် hipster အဝတ်အထည်များဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်မှောင်မိုက်အရောင်များနှင့်အရိပ်။
အ Hipster ပုံစံရှပ်အင်္ကျီများသည် plaids သို့မဟုတ် print များဖြင့် ၀ တ်ဆင်သည် ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ခလုတ်ဆွဲထားကြ၏။
အပူချိန်နိမ့်အရ, hipster လူကိုအသုံးပြုသည် စပျစ်သီးကိုစတိုင် hoodies သို့မဟုတ်ဂျာကင်အင်္ကျီ။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်, ပဝါကိုအသုံးပြုကြသည်, အဟောင်းစတိုင်၏ ဦး ထုပ်, အိတ်သေးငယ်တဲ့။
La မုတ်ဆိတ်မွေး က hipster ဗေဒများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ပုံရိပ်ရင်းမြစ် - www.komparte.com / အမျိုးသားလမ်းညွှန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » သဘောထားတွေ » Hipster ဖက်ရှင်၊ hipster အဝတ်အစား